I-Bayview Suite - Indawo enhle yokubaleka - I-Airbnb
I-Bayview Suite - Indawo enhle yokubaleka
Rockport, Maine, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Cathrine
Ngo-85 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Cathrine Ungumbungazi ovelele
I-Bayview Suite iyindawo ekahle yokubaleka! Itholakala enkabeni ye-Rockport, evumela ukufinyelela okulula eCamden, Rockland Bar Harbor. Ukuhlala ezweni, nokho eduze kwedolobha (amamayela angu-2.5) ngaphandle kwethrafikhi ematasa nomsindo. Itholakala kumahektha angama-20 anomhlaba wokulima kanye nemfuyo ephilayo ezungeze le ndawo enokuthula nenhle. Ipulazi lendawo elisha limi phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo. I-Mountain bike trail endaweni ukuze ufinyelele endaweni ye-ski lodge & nedamu lokubhukuda. Ilungele ukubhukuda, ukugibela isikebhe, ukudoba, ukuhamba ngebhayisikili, ukugibela izintaba nokushushuluza.
Kunokuthula nokuthula. Ukhululekile futhi ethokomele. Amalobster atholakala evilapha noma engaphekiwe. Imakethe yendawo yazo yonke imikhiqizo yakho emisha idinga phakathi kwamamayela angu-2.5. Indawo enhle yesisekelo sokuvakashela izindawo eziningi zaseMidcoast - iBar Harbor, iBoothbay nePort Clyde.
I-wifi esheshayo – 85 Mbps
I-HDTV ene- Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, I-Amazon Prime Video, I-Netflix, ikhebula ye-premium, I-Roku
4.96 · 149 okushiwo abanye
Indawo yokulima enobungane.
Itholakala kakhulu ngocingo, i-imeyili, umbhalo noma mathupha.
UCathrine Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Rockport namaphethelo